Home / वञ्जिजम र पर्यटन विकासका खुड्किलाहरु
नेपाल भौगोलिक धरातल अनुसार एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । नेपालमा विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरु पनि अवस्थित छन् । नेपालको उत्तरी भाग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुन्दर तथा मनमोहक हिमाली श्रृङखलाबद्ध वनजंगल आदिले ढाकेको छ । विभिन्न हिमश्रृङखला हिमालहरु, झरनाहरु, हिराझै टिलिक्क टल्कने तालहरु, श्रृङखलाबद्ध वनजंगल आदिको साथै विभिन्न क्षेत्रमा पाइने हावापानीमा विविधता, ऐतिहासिक कला र साँस्कृतिक सम्पदाको भण्डार भएको देश नेपाल हो ।
सानो र सुन्दर भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपाल भएतापनि यहाँ विकासका अवसरहरु र पर्यटकीय स्थलको सम्भावनामा पनि वृद्धि आइरहेको छ । त्यसरी यस्तै सम्भावना मध्येको एक हो , गण्डकी प्रदेशको कुश्मा नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिका १४ मा बन्दै गरेको वञ्जिजम्पिङ जसले पर्यटनमा निकै नै वृद्धि गर्ने सम्भावना देखिन्छ । एसियाकै पहिलो र विश्वको दोश्रो ५२६ मिटर लामो र २२८ मिटर उचाईमा रहेको वञ्जिजम्प, जसले स्थानीय रुपमा मात्रै नभई सम्पूर्ण पर्यटन व्यवस्था माथि नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । वेल पाकेको फुटाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, भनेझै कुनै पनि राष्ट्रको विकासलाई त्यहाँको पर्यटन विकासले प्रष्ट पारेको हुन्छ । यसरी मुलुकको विकास गर्न पर्यटन विकासलाई अगाडी बढाउने हेतुका साथ स्थापना गरिएको यस वञ्जिजम्पले निर्माणाधिन अवस्थामा नै निकै नै परिवर्तन ल्याइसकेको छ । घडेरीको मुल्य बढ्नुका साथै अन्य कुरामा निकै नै प्रभाव पारेको छ । चार जना समितिले सञ्चालन गरेको यस कार्यले विकास र पर्यटनमा निकै नै सहजता ल्याउने देखिन्छ ।
यस वञ्जिजम्पले मानिसहरुमा रमाइलो ल्याउने मात्र नभइ स्थानीय वासिन्दामा वलेवाबाट कुश्मा जान–आउनमा छोटो र फाइदाजनक भएको छ । पहिलो भोटेकोशीको इन्सपेक्टर भएर काम गरेका राजु कार्की यहाँका प्रमुख भएर कार्य गर्नुभएको छ । बाह्र करोड आन्तरिक लगानी र विदेशी सोचबाट थालनी गरिएको निर्माण कार्य समयको पावन्दिले समयसँगै लगानी पनि २० करोड पु¥याउने अनुमान छ । धन केही होइन तर हरपाइला पाइलामा धन चाहिन्छ भनेझै धेरै लगानी लाग्ने भएतापनि यसका सुविधा र फाइदाले यसमा समस्या देखाएको छैन । कुश्मा बजारको छेउको भू–भाग जुन त्यति महत्वको थिएन तर वञ्जिजम्पको निर्माणसँगै घर–घडेरीको मुल्य बढ्नुका साथै, कालीगण्डकी आकर्षणतामा वृद्धि ल्याएको छ । प्राकृतिक वनावट धार्मीक, पर्यटकीय, सामाजिक साँस्कृतिक हिसाबले कालीगण्डकी आकर्षकता बढाएको छ । निर्माण कार्य हुँदै गर्दा त पर्यटकको संख्यामा वृद्धि आएको छ भने पूर्णता भैसकेपछिको पर्यटन व्यवस्थामा झन चाप हुने आसङका छ । त्भअजलष्अब िप्लयधभिमनभ त्चबलकउयचत भएको यस निर्माणाधिन वञ्जिजम्पमा यो मात्र नभई क्पथ ऋथअष्लिन, न्बिmउष्लन दचष्मनभ, क्धष्mmष्लन आदिले पनि पर्यटन आकर्षकतामा जोड ल्याउने आसङका छ । यसमा क्पथ धबपि आकाशमा हिडेजस्तो अनुभव हुने र नयाँ नबिmउष्लन मभकष्नल मा स्थापना गर्न लागिएको छ । जसमा नमुना पुल निर्माण भएको र आकर्षकतामा झन–झन वृद्धि हुदै आएको छ । यसले एक सानो बजार कुश्मा नगरपालिकालाई नै फेर बदल गरी एकदमै विकसित शहर बनाउने कुरामा कुनै आसङका छैन । पर्यटनको हिसावले हेर्ने हो भने पहिलो भकाउको भन्दा यो धेरै आकर्षित भनिन्छ । र पर्यटकको सङख्यामा निकै नै वृद्धि आउने आसङका छ । यसले कुश्मा न.पा. लाई मात्रै नभई सम्पूर्ण नेपाललाई नै परिचयात्मक बनाइदिने र नेपालकै पयटनको क्षेत्रलाई उकास्न मा मद्दत पु¥याउने छ ।
कुश्मा न.पा. मा रहेको वञ्जिजम्पले राष्ट्रको विकासमा सघाउ पु¥याउने कुरामा आसङका नमानी भन्दा पर्यटनको संख्यामा पनि निकै नै वृद्धि गर्ने स्थानीय श्रोत र साधनको परिचालनमा सघाउ पु¥याउने देखिन्छ । एसियाकै पहिलो र विश्वको दोश्रो यस वञ्जिजम्पले निकै फाइदाजनक कार्य वा सकारात्मकता ल्याउने देखिन्छ । यति मात्र नभई भनिन्छ नि लेखेको पाइन्छ देखेको पाइदैन भनेझै कतै धनि स्थापित र गरिब विस्थापित त हुदैनन् ? यो प्रश्न उठ्न सक्छ । स्थलगत अध्ययन गर्न म गएकोले त्यहाँको सामाजिक अवस्था हेर्दा बढ्दो जमिनको मुल्य र वरपरको भाडा वृद्धिदलरले यस्तो प्रश्न उठाएको छ । धेरै त सकारात्मकता ल्याउला तर केही नकरात्मकता पनि ल्याउने देखिन्छ । प्रायः धनी मानिसलाई यसले फाइदा ल्याउने देखिन्छ । गरिबलाई त यसले असर गर्छ नै जस्तो मलाई लाग्छ , भनिन्छ नि ‘‘ कोहिले भने चमेली धनमाथी धनको ह्रास, गरिबको चमेली केही छैन उठिवास” भनेजस्तो त हुदैन । गरिबलाई त्यस ठाँउ छोड्न बाध्य पक्कै पनि नपरोस । यहि नै मलाई डर लागेको छ । पक्कै पनि स्थानिय निकाएले यसलाई संरक्षणमा जोड गरोस ।
सन्दर्भ सामग्री ः– २०७६/१२/१६ गतेको स्थलगत अध्ययन
– वञ्जिजम्पको कार्य समिति र सम्बन्धित व्यक्तिहरु सँगको अन्तरवार्ता प्रश्नावली